MDC Inoti Vatsigiri Vayo Vari Kutochwa Vari muHusungwa
MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti nhengo dzayo dziri kusungwa zvichitevera kupondwa kunonzi kwakaitwa mumwe mupurisa muGlen View, dziri kutochwa dziri muhusungwa.
Mashoko aya ataurwa nemunyori mukuru mubato iri, VaTendai Biti, pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House neChitatu.
VaBiti vati bato ravo harineyi nekupondwa kwakaitwa Inspector Petros Mutedza avo vakaurayiwa mumhirizhonga yakaitikira mubhawa remuGlen View 3. VaBiti vati mupurisa uyu akafa mumhirizhonga yevanhu vaikakavadzana pamusoro pemutambo wenhabvu waive pakati peManchester United ne Bacelona.
Mukuru wemapurisa, Police Commissioner General Augustine Chihuri, vanoti vanhu vemu MDC ndivo vakaponda Inspector Mutedza, uye vacharangwa zvakaomarara.
Vachitaura vakamiririra VaChihuri neChitatu kurufu rwaInspector Mutedza kuMorris Deport, Commissioner Charles Mufandaedza vakati rufu urwu rwainge rwaburitsa pachena kuti MDC ibato rinoita zvemhirizhonga.
VaMufandaedza vakati mapurisa haasi kuzozorora dakara mhondi idzi dzabatwa. Vagari vemuGlen View 3 vanoti munzvimbo mavo maberekera ingwe sezvo muri kuonekwa mapurisa, mauto nevasori vakapakatira zvombo.
Zvinonzi maiswa ma roadblocks munzvimbo dzakawanda uye vanhu vari kufurufushwa nemapurisa. Nzvimbo dzakatenderedzawo musha weGlen View dzinonziwo hadzina kumira zvakanaka. Vatsigiri veMDC vanonzi vari kunotorwa masikati nemanheru zvekuti vanhu vanodarika makumi matatu vava mumaoko emapurisa.